ओली सरकार न हाँसको चालमा न कौवाको- डा. भट्टराई – Everest Dainik – News from Nepal
गोरखा, असोज २९ । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टी जिल्ला कार्यसमिति गोरखाले आयोजना गरेको दसैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
उनले सरकार यही बाटोमा हिँडे जनताले विकल्प खोज्ने बताए । अहिले सरकारको लक्षण गतिलो नदेखिएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए । राजनीतिक दल र नेतृत्व रुपान्तरण हुन तयार नहुँदा दुई तिहाइको सरकार न हाँसको चाल न कौवाको चाल बनेर अलपत्र भएर बसेको भट्टराईको आरोप छ ।
सरकारले विकास र समृद्घिको न्यूनतम कुराहरु पनि गर्न नसकेको उनले बताए । ‘महिलाहरुमा असुरक्षा बढेको छ, सरकार यस्ता घटनाका दोषी उपर केही गर्न सक्दैन हामी चिन्तित छौँ,’उनले भने ।
विकास निर्माणमा दलीय घेरामा बाँढिन नहुने उनले बताए । व्यक्ति वा निजी क्षेत्रले गर्ने काम राज्यले गर्ने अनि राज्यले गर्ने काम निजी क्षेत्रले गर्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका छुट्टायाउनुपर्ने भट्टराईले बताए ।
संघीयता कार्यान्वनमा जाँदा केन्द्रमा रहेको अधिकार स्थानीय तहसम्म नपुगेको गुनासो बढेको भन्दै यसको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने संयोजक भट्टराईले बताए । ‘केन्द्रमा रहेको अधिकार छाड्न संघीय सरकार तयार हुनुपर्‍यो’ उनले भने,‘लोकतन्त्रमा तलसम्म जति अधिकार पुग्यो त्यति समृद्धिको जग बलियो हुन्छ।’